चैत ६ गतेबाट आइपिओ खुल्ने सिङ्गटी हाइड्रो कस्तो छ? बुझौं – Samriddhakhabar
March 18, 2021 March 18, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on चैत ६ गतेबाट आइपिओ खुल्ने सिङ्गटी हाइड्रो कस्तो छ? बुझौं
कम्पनीका बारेमा: अर्थात चैत्र ६ गतेबाट आइपिओ निष्काशन गर्न लागिरहेको सिङ्गटी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड सन २०१० मा प्राइभेट कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको थियो। यसलाई सन २०१८ मा पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिवर्तन गरिएको हो। यस कम्पनीमा विभिन्न क्षेत्रबाट ब्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरु प्रमोटरका रुपमा रहेका छन्। यसले दोलखा जिल्लामा २५ मेगावाट क्षमताको सिङ्गटी खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाएको छ। यो प्रोजेक्ट बुट मोडेलमा बनेको हो।
आइपिओका बारेमा : सिङ्गटी हाइड्रोपावर कम्पनीले २९ लाख कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो। यो आइपिओको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैया रहेको छ। आइपिओ निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २९ करोड रुपैयाँले बृध्दि हुन्छ।
कति कित्ता भर्दा बेस? :अहिलेको स्थितिमा हेर्दा लगानीकर्ताहरुमा आइपिओ प्रति उच्च आकर्षण भएको कारण यस कम्पनीमा पनि उच्च आवेदन पर्न सक्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। अहिले लगभग सबैजसो कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा लागत भन्दा बढि नै मूल्यमा कारोबार भइरहेकाले गर्दा पनि यो आइपिओ ओभरससक्राइब हुन सक्छ। त्यसैले २ लाख ६९ हजार ७ सयजनाले मात्र १० कित्ताका दरले सेयर पाउने सम्भावना उच्च भएकाले १० कित्ताका लागि आवेदन गर्नु ठिक हुन सक्दछ।
मोबाइल मनीले पायो स्वीकृति, अब टेलिकमका फोन नम्बरबाटै बिना इन्टरनेट कारोबार
निफ्राले उत्कृष्टता केन्द्रमा सूचीकृत गर्ने
युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओ बाँडफाँटआज , यहाँ बाट हेर्नुहोस नतिजा।
July 15, 2021 खबर समृद्ध